Apps अनुप्रयोगहरू तपाईको फोनमा हुनुपर्दछ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B3B बजार समाचार
अप्रिल 21, 2021 अप्रिल 18, 2021 Tracie Johnson ब्लग, विशेष समाचार, प्रविधि
-वोर्क अनुप्रयोग - सामान्य रूपमा सुधार गर्नका लागि एक वाक्य रेखाचित्र लिने मुद्दाहरूको फिक्सिंग द्वारा व्याकुल छक्क पर्छ।
पेनकेक्स र पुशअपहरू एक एकल शक्ति प्रशिक्षण अनुप्रयोग हो जुन तपाईंलाई स्वतन्त्र पार्ने शक्ति छ।
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको फोन एक गेम केटा हुन सक्छ?
१. एक कार्य अनुप्रयोग
धेरै व्यावासायिक प्रकारहरूका लागि व्याकरण र वाक्य वाक्य रचनामा स्कूली शिक्षाको अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्नु बोझिलो हुन सक्छ। मुद्दाहरू फिक्सिंगले व्याकरणले चकित बनाउँदछ जुन सामान्यतया सुधारको लागि एक वाक्य रेखाचित्र लिन्छ। सामान्य लेखन अनुप्रयोगहरूले व्याकरणले केहि गलत फेला पार्दैन। तेज, सुसंगत, र रमाईलो सम्पादन सुझावहरूको साथ पकड व्याकरण तपाईंको फोनमा सबै आपूर्ति गर्दछ।
राम्रोसँग लेखनले कामलाई आमन्त्रित महसुस गर्न मद्दत गर्दछ, र व्यावहारिक लेखकत्वले तपाईको भनाइलाई छिटो बुझ्ने बनाउँदछ। व्याकरणले स्वचालित रूपमा यति धेरै फिक्स गर्दछ।
उनीहरूको कार्यस्थलमा कत्तिको महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी लेखन छ भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन किनकि काम खाली, गाह्रो पढ्न भरिएको छ। राम्रोसँग लेखनले कामलाई आमन्त्रित महसुस गर्न मद्दत गर्दछ, र व्यावहारिक लेखकत्वले तपाईको भनाइलाई छिटो बुझ्ने बनाउँदछ। व्याकरणले स्वचालित रूपमा यति धेरै फिक्स गर्दछ।
२. कसरत अनुप्रयोगहरू
पेनकेक्स र Pushups एक चालाक कसरत अनुप्रयोग को लागी एक मिठो नाम हो कि वास्तविक को लागी तपाइँको फ्रेम बाट पाउन्ड ड्रप। यति धेरै वजन घटाउने कार्यक्रमहरूमा हराइरहेको घटक स्थायित्व हो। पेनकेक्स र पुशपहरूले स्थायी तौल नियमित बनाएर तौल घटाए पछि खराब बानीमा नबस्न प्रयास गर्नेहरूको दुविधा समाधान गर्दछ।
अब कोही कोही पनि उनीहरूलाई चाहिएको जस्तो आकारमा हुनसक्दछ किनभने वजन घटाउन वजन फिर्तामा परिवर्तन हुँदैन। पेनकेक्स र Pushups एकवचन हो शक्ति प्रशिक्षण अनुप्रयोग तपाईंसँग स्वतन्त्र गर्न सक्ने शक्ति छ।
फोनमा संगीत अनुप्रयोगहरू एक पटक आईपडले एक मात्र कब्जा गरेको ठाउँ ओगट्यो। स्पोटिफाई स्टाइलहरू पनि आफूलाई संगीतको रूपमा झुकाइएको साथीको रूपमा। यो एक विचार वा एक युग मा केन्द्रित छ कि नवीनतम संगीत र कलात्मक मिक्सटेप्स को विशेष गरीरहेको प्लेलिस्टहरूको निरन्तर स्ट्रिम प्रदान गर्दछ। यो संगीत अनुप्रयोग ती पुरानो आइपडहरू भन्दा राम्रो छ किनकि यसले कुनै पनि गीतहरू तपाईंलाई उत्पादन गर्न सक्छ।
अर्को हाइलाइट एक एल्गोरिथ्म हो जसले संगीत आपूर्ति गर्दछ जुन तपाईको स्वादलाई राम्रोसँग सूट गर्दछ। नि: शुल्क अनुप्रयोगको रूपमा, स्पोटिफाइ दुबला र मीन हो, तर यो सदस्यताको साथ अझ राम्रो हुन्छ। Spotify कुनै पनि अपवादात्मक कसरतको एक भागको रूपमा अग्लो खडा हुन्छ।
Play. अनुप्रयोगहरू खेल्नुहोस्
बेसबल सीजनको ढिलो, सोच्ने-उत्तेजक ग्रिडको लागि लत लागेको कसैको लागि MLB.TV भन्दा राम्रो तपाईको फोनमा छैन। अन द गो मा बेसबल ल्याउँदा घर छोड्दा अप हुन्छ जब यो खोल्दछ, र MLB.TV सबै आउट-अफ-मार्केट बेसबलको सदस्यता छ जुन तपाइँ पेट सक्नुहुन्छ।
बेसबलको मौसममा ढिलो, चिन्ताजनक पैदा गर्ने ग्रिडको लागि कसैको लागि MLB.TV भन्दा तपाईंको फोनमा पहिले भन्दा राम्रो अनुप्रयोग छैन।
तपाईको फोनमा बेसबललाई केहि पनि हराउँदैन, तर तपाईसँग यसको लागि सही मानसिकता हुनै पर्छ। काम पछि यसलाई खोल्नुहोस् र अर्को दिनको मान्छेसँग कुरा गर्नुहोस् कि कसरी तपाईंको दिन भयो, तब तेस्रोमा एक झोला लिनुहोस् तपाईं सातौंमा उठ्नुभन्दा अघि जब गेम उही स्कोरमा रहन्छ। तपाईंको टोलीको लागि दैनिक एक क्लामाक्टिक फिनिश, र रूट हेर्नुहोस्। यो बलपार्कमा जाँदा र तातो कुकुरलाई जस्तै हो। तपाईंको सीट खोज्नुहोस् किनकि बेसबललाई केहि पनि हराउँदैन, र यो गतिशीलताबाट अब नयाँ उचाइहरूमा पुग्न सक्दछ।
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईको फोन पनि एक हुन सक्छ खेल केटा? तपाईं फाइनल फ्यान्टेसी जटिल खेलहरूको लागि आफ्नो फोन प्रयोग गरेर मोबाइल कन्सोल खरीद सयौं डलर बचत गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै भिडियो गेम क्लासिकहरू तपाईंको हातको हत्केलामा बसिरहेका छन्, र यदि तपाईं आफ्नो फोनमा गेमि intoमा थोरै पैसा राख्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यो स्पष्ट रूपमा एक कन्सोल हो।
तपाईं पुरानो रोलप्लेइ games खेलहरू अंतिम काल्पनिक खेल खेल्न सम्झन पर्याप्त उमेर नहुन सक्नुहुन्छ। अझै, तिनीहरू सेलफोनमा उपलब्ध छन्, जसले खेलाडीहरूको अर्को पुस्तालाई यी क्लासिक्स र उनीहरूको उचाइहरूको शोभा बढ्न दिनेछ। अन्तिम काल्पनिक खेलहरू गेमि ofको फ्रन्स्टी शिखरमा हुन्। तपाइँलाई थाहा छैन शायद तपाइँसँग एक महँगो कम्प्युटर किन्नुभन्दा खेल्नको लागि तिनीहरूसँग हुन सक्छ।
यी अनुप्रयोगहरू तपाईंको जीवनमा सम्बन्धित छन्। तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नाले तपाई अझ खुसी व्यक्ति बन्नुहुनेछ। काम र खेल बाट मात्र कामका लागि, यी फोनमा सबै-समय आवश्यक छन्। यी विस्तृत अनुप्रयोगहरू मध्ये कुनै तपाईंको फोनबाट तपाईं पहिले नै गरेको भन्दा अधिक गहिराई अनलक हुनेछ। के तपाई आफ्नो फोनबाट उत्तम पाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईं चाँडै हुनेछ।
अनुप्रयोग सांप्रदायिक समाचार आईफोन टेक